Warshadaha khadadka shiinaha iyo qalabka iibiya | Hongli
Escalator waa nooc ka mid ah qalabka socda ee socda oo ka kooban silsilad gudbiyaha qaab-dhismeedka khaaska ah iyo qalabka suunka ee qaab-dhismeedka khaaska ah. Waxay leedahay faa'iidooyin badan sida awoodda gaadiidka ballaaran, shaqaalaha gaadiid joogta ah. Marka shuruudda nabadgelyadu waa ka sareyso qalabka kale. Waxaa badanaa lagu isticmaalaa meelaha dadku isugu yimaado oo dadku ku badan yahay, sida suuqyada wax iibsiga, naadiyada, saldhigyada, gegooyinka diyaaradaha iyo jaranjarada.
Wadada ugu weyn waxay leedahay awood kufilan iyo adkeyn iyo barkimo kaladuwan ayaa ku xirnaanaya qarka. Ku samee soo ogaanshaha cillad xagga qaybaha alwaaxdu ku taal qarka. Sprocket waxay qaadataa bir qaas ah, ka dib daaweynta kuleylka, adkaanta dusha sare waa mashaariic macquul ah oo dhulka hoostiisa mara oo badanaa ubaahan in la hubiyo nolosha shaqada ee ka badan 20 sano. Dhererka silsiladda wadista weyn waa inay ahaato mid dhexdhexaad ah. Haddii silsiladda wadista weyn ay aad u adagtahay ama aad u dabacsan, raaxada kursiga rakaabka ayaa la saameyn doonaa, taasi waa, qiimaha dhaqdhaqaaqa ee wiishka kor u kaca ayaa kordhaya.
Xawaaraha socodka suunka gacanta
Xawaaraha orodka suunka gacantu wuxuu la xiriiraa talaabada iyo farqiga la oggol yahay ee baarida waa 0- + 2%.
Waa maxay sababta suunka gacantu uu uga deg degsan yahay pedal?
Marka hore, heerarka kor ku xusan waxay u baahan yihiin in xawaaraha suunka gacantu uu ka weynaado ama u dhigmo xawaaraha jaranjarada. Shuruudda noocan oo kale ah ayaa ah in laga hortago in gacanta lagu dhigo gacanta, maahan sababta oo ah xawaaraha suunka gacan-qabashada ee ka dambeysa xawaaraha tallaabada ama bawdada oo sababa in jirka bini aadamka uu dib u soo laabto oo shil galo.
Markaa dadku way dhaawici karaan waxbadan marka uu gadaal u dhaco marka loo eego marka uu hore usii jeedo.